Ny fitsangatsanganana amerikana dia miarahaba ny fanamarihana nataon'i Biden momba ny fanonganana ny fandraràna ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena mankany Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny fitsangatsanganana amerikana dia miarahaba ny fanamarihana nataon'i Biden momba ny fanonganana ny fandraràna ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena mankany Etazonia
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Milaza ny siansa fa afaka manokatra soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena i Etazonia ankehitriny, indrindra ho an'ireo firenena izay nahavita fandrosoana lehibe tamin'ny fanaovana vaksiny ny olom-pireneny.
Ny fampahalalana misimisy momba ny fotoana hampiakarana ny fandrarana ny dia iraisam-pirenena dia mety ho tonga ao anatin'ny andro maromaro.
Amin'ny alàlan'ny fiarovana ara-dalàna, ny fanadihadiana nataon'ny departemantan'ny fiarovana amerikana, Mayo Clinic ary ny oniversiten'i Harvard dia nanatontosa tsy miankina ny fiarovana ny dia an-dranomasina.
Isan'andro izany famerana efa lany andro amin'ny dia izany dia miteraka fahasimbana ara-toekarena ho an'ny firenentsika.
US Travel Association Ny filoha lefitra mpanatanteraky ny raharaham-bahiny sy ny politika Tori Emerson Barnes dia namoaka izao fanambarana manaraka izao momba ny fanamarihana nataon'ny filoha Biden momba ny fisokafan'ny dia iraisam-pirenena:
"Mankasitraka ny fanamarihan'ny filoha izahay, natolotray miaraka amin'ny Chancellor Alemanina Angela Merkel, fa ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fotoana fanonganana ny fandràrana ny dia iraisam-pirenena dia afaka tonga ao anatin'ny andro vitsivitsy."
“Milaza ny siansa fa afaka mamoha soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena isika izao, indrindra ho an'ireo firenena izay nahavita fandrosoana lehibe tamin'ny fanaovana vaksiny ny olom-pireneny. Amin'ny alàlan'ny fiarovana ara-dalàna, ny fanadihadiana nataon'ny Departemantan'ny Fiarovana amerikana, ny Mayo Clinic ary ny Harvard University dia samy nanatontosa tsy miankina ny fiarovana ny dia an-dranomasina anio.
“Isan'andro ny fameperana lany andro amin'ny dia dia manimba ny toekarentsika, tsy lazaina intsony ny isan'ny maty manokana an'ny olona tafasaraka amin'ny fianakaviany sy ny olon-tiany. Ny fandraràna ny dia lavitra mifandraika amin'i Canada, Europe ary UK fotsiny dia mitentina 1.5 tapitrisa dolara amerikana amerikana isan-kerinandro - ampy hanohanana ny asa amerikanina 10,000.
"Ny indostrian'ny fizahan-tany amerikana dia manentana ny fitondrana Biden, mifanaraka amin'ny siansa farany indrindra, mba hamerina haingana ny politikam-pireneny momba ny dia iraisam-pirenena."